2019-05-22 19:08:57 ,*အလုပ်ရှာဖွေနေပါသလား? Ruby Jo…
(1) Office Staff/Reception M/F(5)Posts
– လစာ 140,000 – 170,000
– ဆယ်တန်း၊အသက်(၃၀)အောက် – အတွေ့အကြုံမလို – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (24.5.2019)သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၁၂)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်
2.ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးအတွက်
(1) Site Engineer M(5)Posts
– BE(Civil) Auto CAD 2D,3D၊အသက်(၄၀)အောက် – အတွေ့အကြုံ(၃)နှစ် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီ
(1) DTP Staff M/F(5)Posts
– ဆယ်တန်းအောင်၊အသက်(၃၀)အောက် – အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်၊Pagemaker/DTP – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (24.5.2019)သောကြာနေ့ မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်
(1) Sale Staff M(5)Posts
– ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အသက်(၂၅)အောက် – အတွေ့အကြုံမလို – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီ
5.ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ Chemical Company ကြီးအတွက်
– ဆယ်တန်းအောင်၊အသက်(၂၅)အောက် – အတွေ့အကြုံ(၆)လ၊ Computer Basic သုံးနိူင်သူ – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (24.5.2019)သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်
6. တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးအတွက် (1) Junior Accountant F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(မလို) – အသက်(၂၀-၃၀)ကြား၊Computer သုံးနိူင်သူ
(2) Storekeeper F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ – အသက်(၂၀-၂၈)ကြား၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေတစ်ရက် – 23.5.2019(ကြာသပတေးနေ့)နေ့လယ်(၁၁)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
7. လသာမြို့နယ်ရှိ ကလေးကစားစရာပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ကြီးအတွက် (1) Manual Account F(3)Posts – လစာ – 140000-170000 – ဆယ်တန်းအောင်၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ – အသက်(၂၀-၂၅)အတွင်း – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေ – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 23.5.2019(ကြာသပတေးနေ့)မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
8.ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ Digital Printing Service လုပ်ငန်းကြီးအတွက် (1) Marketing F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဆယ်တန်းအောင်၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အသက်(၂၀-၃၅)အတွင်း – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေပိတ် – 23.5.2019(ကြာသပတေးနေ့)မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
9.ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးအတွက် (1) Sale & Marketing Staff F(5)Posts – လစာ – 140000-170000 – ဆယ်တန်းအောင်၊အတွေ့အကြုံ(မလို) – အသက်(၂၀-၂၅)အတွင်း၊နယ်သွားနိူင်ရမည်။ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၇း၀၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၀၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေတစ်ရက် – 24.5.2019(သောကြာနေ့)မနက်(၉)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
10.မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရTrading Company ကြီးအတွက် (1) Sale & Marketing Supervisor M/F(5)Posts – လစာ – 300000 – 400000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်၊Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိူင်သူ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေတစ်ရက် – 24.5.2019(သောကြာနေ့)မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
11.တောင်/ဥ မြို့နယ်ရှိ Media & Advertising Company ကြီးအတွက် (1) Photoshop M/F(3)Posts – လစာ – 200000 – 250000 – ဆယ်တန်း၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီထိ
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-05-22 by admin.
← 2019-05-22 18:16:49 ,Intelligent တရုတ်စာကျောင်းမှ ဇ… 2019-05-22 20:37:47 ,Projetct Manager Web designe… →